Dhageyso:- Madaxweyne Xaaf”waxaan ka badbaaday Qorshe ay igu xiri laheyd Dowladda Federaalka” | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Dhageyso:- Madaxweyne Xaaf”waxaan ka badbaaday Qorshe ay igu xiri laheyd Dowladda Federaalka”
Dhageyso:- Madaxweyne Xaaf”waxaan ka badbaaday Qorshe ay igu xiri laheyd Dowladda Federaalka”
Madaxweynaha Maamulka Galmudug Axmed Ducaalle Geelle (Xaaf) ayaa markii ugu horeysay shaaciyay inuu ka badbaaday qorshe Dowladda Federalka Soomaaliya ay isku dayday oo ku aadan in gacanta lagu soo dhigo.
Wuxuu sheegay inay nasiibdaro tahay Dowladii Soomaaliya ee dalka la doonayay inay ka hirgeliso nidaam Maamul inay isku dayeyso fulinta afgambi qorsheysan oo lagu carqaladeynayo Maamul nidaam leh oo dhisan.
Axmed Ducaalle ayaa sheegay marxaladda Soomaaliya hadda la joogo in loo baahan yahay ka fekerida horay u socodka Soomaaliya, balse aanan loo baahneyn in laga fekero sidii loo dumin lahaa Maamulada dhisan.
Dowladda Federalka Soomaaliya ayaa wuxuu ugu baaqay inay ka shaqeyso nagaadshaha marxaladda Siyaasadeed ee dalka, loona baahan yahay kaalin muuqata inay ka qaadato oo aysan ku mashquulin arrimo kale.
Mahaan hoose ka dhagayso